Ururada suuqgeynta suuq geynta ee Guerrilla waxay sameynayaan ololayaal
Toos ugu bood tusmada
suuq gumeysi casri ah & farshaxanno waaweyn oo ay soo bandhigeen caalamku
waan ka caqli badanahay, ka xeel dheernahay, oo xitaa ka sii dagaal badan dhammaan agabyahannada ka horreeyay. waxaan xiriir aan la ilaawi karin la sameynay macmiilkaaga.
codeynta ku noolaanshaha
Mas'uuliyadda shirkadda CSR
Ku soo dhowow Hay'adda Caalamiga ah ee Caveman!
Farshaxanno waaweyn iyo fikradda suuqgeynta dhuumaalaysiga ah ee MyToys
Ku soo dhowow Wakaaladda Caveman International, waxaan ilaalinaa macaamiisha caanka ah sida Spotify, Wikipedia iyo MyToys aagga Suuq-geynta Guerilla. Mas'uuliyadda Shirkadeed ayaa muhiim noo ah, taasi waa sababta aan u taageerno macaamiisheenna Ururada xuquuqda aadanaha iyo gargaarka horumarinta.
Suuq geynta dhuumaalaysiga jiilaalka ee ODLO oo leh Detlef D! magaalada Munich
Capital Bra waxay raadineysay wakaaladda jarmalka ee ugu xiisaha badan dhulka hoostiisa si ay dib ugulaabto albumkiisa cusub. Falalka kacsan ee ka socda magaalada Berlin, saadaasha iftiinka ee gawaarida guuritaanka iyo kororka badan. Wargeysyo kala duwan ayaa ka warbixiyay dadaalladeenna.
Saadaasha fiidiyooga inta lagu gudajiro barnaamij toos ah oo TV-ga laga daawanayo oo lagu xayeysiinayo shirkadda 'BritAwards' ee London ee loogu talagalay NGO
Suuq geynta. Caveman International waxay ahayd hay'addii ugu horreysay ee xayeysiis ah oo bixisa qoraallo gadaal loogu beddelo & calaamadeynta waddooyinka oo lala yeesho fannaaniinta Jarmalka tan iyo 2006. Astaamaha Moss, boorarka moss, farshaxanada moss, calaamadaha moss, wax walboo waa suurtagal! Moss si qumman ayaa looga shaqeyn karaa iyada oo taxaddar yar lehna waxay ku sii jirtaa cagaar carwadaada.
Waxaan booqasho ku tagnay midab-huriye huruud ah oo leh saameyn-yaqaan caan ah. Xulitaan aan la dhaafi karin
Mashruuca Badenova AG Agoosto 2019: Isbedelka Cimilada annaga oo dhan ayuu ina khuseeyaa!
Suuq geynta Guerrilla - waa farshaxanka lagu hubinayo gaadhista ugu sarraysa iyo heerka ugu sarreeya ee dareenka macaamiisha iyada oo la maalgelin yar yahay.
Iyada oo leh boodhadhkayaga gaarka ah ee 'SnowOnDemand', diiradda ayaa saaran xayeysiintaada. Barafka aan dhalaalayn ee aan dhalaalayn ayaa ku habboon soo jiidashada dareenka.
Waxaan ku faraxsanaan lahayn inaan si shaqsi ah kaagala talinno mawduuca ku saabsan suuq geynta fayraska & noocyada kale ee dhuumaaleysiga ah ee xayeysiinta. Toos ugu wac wakaaladayada xayeysiinta suuq geynta dhuumaalaysiga ah!
Isniinta Iibka - Sabti 10 a.m. - 20 p.m .: +49 2131 4058-629
Mashaariicda hadda jira
SPOTIFY Marathon waa diyaar
Gargaare pixel Fikrad faafin ah oo lagu soo bandhigay Afrika
Had iyo jeer currywurst. Had iyo jeer ballanso xayeysiinta boosta. Had iyo jeer isku arag ...
Anaga waxaan joognaa Caveman waxa ay leedahay aragtida sida wakaaladda suuq geynta.
Ka fikir duufaan, ku saabsan galaxyad kale, dib ugu soo noqo alaabtaada, mar walba nolosheena hal abuurka ah halis galin.
Fadlan ka soo qaad liiskayaga liiskayaga si aad u hesho aragti kooban oo ku saabsan waxa aan bixino. Fadlan riix halkan
Suuq-geynta Caveman Guerrilla waa mid ka mid ah hay'adaha ugu fiican ee laga isticmaalo submarine ee suuqa. Caadiyan waxaanu shaqeynaa
Aqoonsiga wakaaladaha waaweyn ee shabakada gawaarida iyo suuqgeynta suuqyada, waxaan sidoo kale qaadannaa ololaha siyaasadeed
Nidaamyada hay'adda xayeysiinta suuq-geynta xagjirka
Jay C. Levinson wuxuu abuuray shuruucda suuq geynta suuqa 80. Caveman International, sidoo kale, ayaa nafteeda ku ballan qaadday sharciyadan muhiimka ah taasina waxay keenaysaa mashaariicda xayaysiinta ee rafcaanka dhammaan dareemayaasha macmiilka.
Gawaarida Guerilla waxay ujeedadeedu tahay dareenka maskaxdaada. Shuruudaha caadiga ah ee warshadaha xayeysiinta sida TKP, CPC waa in la iska indho-tiraa ujeedada ah in lagu gaaro xannuun.
Suuqgeynta Guerrilla waxay kuu ogolaaneysaa inaad si toos ah u weerarto tartankaaga. Ma jiro tartan la hubo qalabyada kala duwan ee suuq geynta.
Takhasuska shakhsi ahaaneed wuxuu qurxiyaa ololaha hay'addayada.
FÜHR WACADKA Suuq
Halkaad ka heli laheyd xayeysiiska xayaysiinta, ololayaashu waa inay si wacan u yimaadaan kooxda bartilmaameedka si markaa ololehaaga xayeysiiska loo gudbiyo saaxiibadaa iyo asxaabteeda sida ugu macquulsan.
Guerilla Marketing waxay abuureysaa meel bannaan si wax looga qabto dhageystayaashaada bartilmaameedka tooska ah halka aad joogtid. Hadday ku taal barkadda dibadda, xaflad ama doorasho.
Suuqyada Guerrilla dareenka dadku waxay abuurayaan dareenka calaamadaada.
Waxaanu kugu soo aruurineynaa waxqabadyadayada ku jira ololayaal awood leh.
Dhammaan wakaaladaha iyo macaamiisha dhammaadka ah ee daryeelay waxay 24/7 xiriir la leeyihiin Caveman International si ay si dhaqso leh uga falceliyaan arrimaha taagan. Hadday tahay xayeysiin Twitter ah oo ku saabsan Superbowl; ama ballansashada warbaahinta munaasabadaha TVga ee muhiimka ah. Hay'adayada ayaa daryeeleysa xayeysiintaada waxayna si joogto ah ulashaqeysaa wakaaladaha caanka ah ee shabakadaha aduunka oo dhan. Faa'iidooyinkayadu waxay bixiyaan:
∴ Horumarinta fikradaha iyo ololayaasha fayraska
Marketing Suuq Gadiidka Warbaahinta ee Yurub
∴ Isticmaal shaashad shidaal ah oo shaashado waaweyn ah
Marketing Suuq Fudud & Farshaxan Fudud
Marketing Suuq-geynta Shirkadda
Khariidaynta 3D guryaha & walxaha dhaqaaqa
Dallacaad & meelo aan caadi ahayn
Camera Kamaradda hawada ee hawada ayaa u duusha
Vert Qoob-ka-ciyaareynta & Cadaadiska Cadaadiska Sawirka Qarsoon
Advertising Xayeysiinta laser-ka & laser-ka qaanso roobaadka
∴ Flyvertising iyo walxaha kale ee duullimaadka ah ee loogu talagalay daroogada sare ee kooxo dad ah
Stick warqad dhejis ah, farshaxanka farshaxanka ee 3D dabaqa dhulka
Art Farshaxan wado leh farshaxan yaqaano kubadda cagta ah
Gr Grafiti Chalk Grafiti ama Stencils Stencils
Stick Qashin-xayeysiis iyo foorno foorno oo ku dhajiya dhammaan dusha sida derbiyada guriga
∴ Streetbranding waxaa ka mid ah horumarinta hay'adeena xayeesiinta
Diidmada xayeysiinta & sumadeynta waddooyinka
Campaign Ololeyaal qiiro leh oo ku saabsan shabakadaha bulshada
Actions Ficillada dimoqraadiga
Heshiisyo lala galay Wall AG iyo Stroeer Service oo loogu talagalay xayeysiinta & boorarka banaanka
Marketing Suuq geynta jaamacada oo leh hay'ad xafiis iyo adeegga duubista
∴ Gadiidka Guerilla ee dhammaan dhinacyada horumarinta warshadaha
∴ Hoos-u-dhacyada suuq-galka xeryaha
Parties xafladaha xarkaha gacanta iyo xafladaha barafka loogu talagalay dhacdooyinka iyo riwaayadaha
Xamaasad xoog leh & riwaayadaha qarsoon ee dadweynaha
Saarbrücken oo saadaalinta khariidadaynta xNUMXD
Calaamada ugu dheer ee adduunka
Caveman International Isticmaal adeegga Full khabiirka wakaalada hoos-u-linenoqo noqosho lugta labaad on ololayaal siyaasadeed ku takhasusay. aqoon Core waa fikirka iyo fulinta Suuq-geynta Guerilla iyo Suuq geynta Cabbiraadaha, Bixinno, Dhacdooyin, Dhiirigelin iyo Samplings.
Art light iyo taariikhda dhacdooyinka Qalabka nalalka ah ee dhexdhexaadintu waa mid ka mid ah murugo weyn.
Aagga ololeynta Haddaan nahay wakaaladda suuq geynta dhuumaalaysiga waxaan jabineynaa dhul cusub. Doorashooyinka tusaale: Markay doorashadu soo dhowaato, ayaa inbadan sii kordheysa aad u muhiim ah ayaa ah tallaabooyin la yaab lehololaha doorashada codbixiye sare si ay u gaaraan iyo u Inaad ku guuleysato hadafyadaada, Isgaadhsiin hoose ah oo muujinaysa codsi aan caadi aheyn hal mar, xigmad leh istaraatiijiyooyin feker ah oo la yaab leh waa gobolka farshaxanka - iyo awooddeena asaasiga ah sida Wakaaladda Gaarka ah ee Guerilla
Wakaaladda Wershada ee Suuq-geynta
Dadka aan caadiga ahayn bixiyaan aragtiyo aan caadi ahayn. Dad kala duwan isticmaal taas gebi ahaanbain suuqgeyntu ay bixiso. Maxaa u muuqda mid cagaaran, kan kalena waa kan kale. Maxaa middaas ah looker waa, kaliya waxay ka dhigaysaa midda kale. Mid ka mid ah ayaa sheegay in fowdo, ay tahay mid kale oo cajiib ah. 40 madaxyo xayeysiis ah hubso in xayawaanka indhaha lagu xalliyo aadanaha.
Curyaanku ma caqli galin, laakiin fikradaha adag ee lagu guuleystay iyo ka hadlay xalka hubso in tallaabooyinkayagu yihiin imagination iyo riyooyin si ay uga codsadaan dhagaystayaasha. Himiladayadu waa aqonsado, Hadafkayagu waa inaan hubinno in qof kasta oo arkay shaqadeenu uu rabo in uu la wadaago. Waxaanu diirada saarnaa fikradaheena ilaa inta suuragal ah aasaaskaIlaa aan la arki karin cad wuxuu yimaadaa iftiin.
Tan iyo tan La aasaasay sannadka 2000 waxay ahaayeen dagaal khubaro ka hay'adda xayeysiinta suuq geynta caalamiga ah Caveman oo leh qaabka ugu casriga badan ee casriga casriga ah iyo mashaariic aan caadi aheyn macaamiisha caanka ah Hooska hore ee Netherlands, Morocco iyo Jarmalka.
Drones-ka xayeysiinta ee Lenor, Procter & Gamblet
Saadaasha iftiinka Habeen cas oo ah baararka
IFA faafinta caddaalad cadaalad ah
2020	suuq gumeysi casri ah & farshaxanno waaweyn oo ay soo bandhigeen caalamku
Kor ↑	Sare ↑